Filipina: Gadra Politika Manoratra Diary Avy Any Am-Ponja ao Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2011 7:01 GMT
Teo ampiomanana ny hiondrana an-tsambokely mandeha maotera ho any amin'ny tanàna kely ambanivohitra ao San Jorge any atsinanan'i nosy Samar ao Filipina i Ericson Acosta tamin'ny 13 Febroary 2011 tamin'ny fotoana nisamboran'ny olon'ny mpitandro filaminana ao Filipina azy. Hafahafa ihany, ireo nisambotra an'i Acosta dia mialokaloka amin'ny hoe izy mitondra solosaina finday nefa ho any ambanivohitra no anton-dia. Ny fiampangan-dry zareo azy ho atidohan'ny firohotana kaomionista eo amin'ny tanàna kosa, na izany aza, no tena zavatra tsy ivazivaziana.
Nahatratra 126 no isan'ny maty tsy nisy fitsarana tany amin'io faritra io raha 27 kosa ireo nantsoina hoe desaparecidos (olona tsy hita nanjavonana) tao amin'ny faritra nandritra ny fitondrana teo aloha nentin'i Gloria Macapagal-Arroyo. Teo an-dalam-panoratana ny Toerana misy ny Zon'Olombelona eo amin'ny faritra i Acosta tamin'ny fotoana nisamborana azy.
Mbola mitohy voatazona ao amin'ny fonjan'ny tanànan'i Calbayog izay ao Samar ihany koa i Acosta. Araka ny tatitry ny fikambanana KARAPATAN mpiaro ny zon'olombelona dia fanampiny amin'ireo gadra politika 353 voatàna any amponjan'i Philippines efa hatramin'ny 30 Desambra 2010 i Acosta.
Iray amin'ireo zava-baovao ao anatin'ny fanentanana ho famotsorana an'i Ericson Acosta ny fampiasàna betsaka sy amin'ny fomba mivoatra ny fitaovana atolotry ny aterineto ho fisoloana vava. Tsy toy ilay filaozaofa Italiana Antonio Gramsci, izay niandry efa ho telopolo taona vao afaka namoaka ny Prison Notes nosoratany, fa ny diarin'i Ericson Acosta azy manokana momba ny fiainany tam-ponja kosa dia mivoaka tsy tapaka ao amin'ny aterineto amin'ny acostaprisondiary.blogspot.com. [angl.].
Ny Jailhouse Blog dia ahitàna ireo zavatra iainan'i Acosta ao am-ponja toy ity fampidirana voasoratra tamin'ny 13 Aprily lasa teo ity:
Na ilay fampidirana voasoratra tamin'ny 17 Aprily lasa teo:
Manasongadina ny fandinihan'i Acosta ny fonja ihany koa ilay bilaogy:
Ary ireo tononkalo voasoratr'i Acosta fony tany am-ponja koa dia navoaka tao amin'io bilaogy miresaka fonja io.
Ankoatry ny famoahana anaty aterineto an'io diary tany am-ponja io, ireo mpikarakara ny Free Ericson Acosta Campaign (Fanentanana ho famotsorana an'i Ericson Acosta) dia tonga koa hatrany amin'ny fametrahana fanangonan-sonia anaty aterineto. Nanangana pejy Facebook iray koa ry zareo izay efa nisy mpitia 788 hatramin'ny fotoana nanoratana an'ity.
Mitohy mitombo hatrany ny fanohanana ilay hetsika ho famotsorana an'i Acosta ary manaporofo izany ireo isa tsy mitsaha-mitombon'ny fanambaràna, fijoroana vavolombelona ary lahatsoratra hafa nangonina ao amin'ny bilaogy fanentanana freeacosta.blogspot.com. Ny ady ho fanafahana an'i Acosta sy ireo gadra politika maro hafa dia mbola mitohy.